वीर अस्पताल द्वारा दुवाकोटमा सेवा शुरु - Sanibar News
वीर अस्पताल द्वारा दुवाकोटमा सेवा शुरु
काठमाडौँ, २४ असोज : सबैभन्दा पुरानो अस्पताल वीर अस्पतालले भक्तपुरको दुवाकोटबाट स्वास्थ्य सेवाको शुरुआत गरेको छ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गतको वीर अस्पतालले सो स्थानबाट आजदेखि बहिरङ्ग स्वास्थ्य सेवा (ओपिडी) सेवा शुरुआत गरेको हो । अस्पतालका निर्देशक प्राडा भुपेन्द्र बस्नेतले सो स्थानमा न्याम्सले वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अत्याधुनिक भौतिक संरचना तयार गर्न स्वीकृतसमेत दिएको जानकारी दिनुभयो । ओपिडी सेवा बिहान ९ देखि ५ बजेसम्म हुने उहाँले बताउनुभयो ।
थप उपचार गर्नु परेमा वीर अस्पतालमा अर्काे टिकट लिन नपर्ने व्यवस्थासमेत अस्पतालले गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले न्याम्सलाई सो स्थानमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न भौतिक संरचना गर्न करीब ५७० रोपनी जमीन उपलब्ध गराएको थियो ।
शल्यक्रिया भवन छुट्टै
नौ तलाको अत्याधुनिक सो भवनभित्र १५ वटा चिकित्सा विज्ञानका अत्याधुनिक शल्यक्रिया (अपरेश थिएटर) रहनेछन् । यसैगरी पोस्ट अपरेटिभ, ४० श्ययाको सर्जिकल अति सघन कक्ष र पुस्तकालय रहनेछन् । साथै ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग तथा बिरामी कुरुवा मैत्री भवन बन्नेछ । नेपाल सरकारको रु तीन अर्ब ८५ करोडको लागतमा सो भवन विसं २०७७ भित्र निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ । तर भवनको निर्माण कार्य अति सुस्त गतिमा रहेको देखिन्छ ।
विसं १९४७ मा १५ श्ययाबाट सेवा दिन शुरु गरेको वीर अस्पतालको हालको क्षमता ४५० श्ययाको रहेको छ । अर्काेतर्फ न्याम्सले छिट्टै ६५० श्ययाको मेडिकल भवन निर्माण कार्य शुरु हुने तथा सय श्ययाको विशिष्ट प्रकारको विशेषज्ञ मेडिकल भवन जापान सरकारको आर्थिक सहयोगमा शुरु भइसकेको जनाएको छ ।
उहाँले भन्नुभएको थियो, “देब्रे घुँडा र दाहिने घुँडा छुट्याउन नै नसक्ने, एउटा खुट्टा बिरामी छ अर्काेको उपचार गर्ने ? यो तहको चिकित्सा सेवाले कहाँ पु¥याउँछ ? यस प्रकारको हेलचेक्र्याईं दोहोरिन भएन, चिकित्सक र सिङ्गो चिकित्सा क्षेत्र गम्भीर बन्नुप¥यो ।”
Previous राष्ट्रपति निवासमा घटस्थापना
Next सबै हिसाबले प्रदेश नं ३ को राजधानी हेटौँडा नै उपयुक्त नेता बानियाँ
अस्पतालभित्रै झुण्डिएर आत्महत्या
न्यूनतम तापक्रम घट्यो : अझै चिसो बढ्ने